पानी परे रातभर निदाउँदैनन् गैरी गाउँ बासि - Saptakoshionline
पानी परे रातभर निदाउँदैनन् गैरी गाउँ बासि
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आषाढ ०६, २०७६ समय: ६:४६:४४
पारस सुबेदी (अबिरल)
इटहरी उपमहानगर पालिका वडा न. ४ गैरी गाउँका बासीन्दामा डर उत्पन्न हुन थालेको छ उनिहरु भन्छन असार लाग्यो अब त राति निदाउन कहाँ पाइन्छ र ?
२०७४ सालको बुढि खोलाको बाढिबाट डुबानमा परेका स्थानिय बासि मा हरेक बर्षको झरीमा उनिहरु त्रसित बन्नु परेको छ । २०७४ सालको बाढिमा गैरीगाउँ बासलिे निकै धनजन र मानबिय क्षति व्यहोर्नु परेको थियो ।
२०७४ सालको बाढिबाट ठुलो जोखिम व्यहोरेकी इटहरी गैरीगाउँ निवासी सानु माया राइ भन्नुहुन्छ पहिलेको बाढिमा इटहरीबाट बाढीमा बगेर दुहबि मा उद्धार गरीएको थियो । बाढिमा बगेका ६ जना मध्य दिदि भिनाजु र उहाँहरुको छोराको निधन भयो बाकि ३ जनालाइ सकुसल उद्धार गरीएको थियो । बल्लतल्ल त्यो पीडाबाट माथि उठेको परिवार अहिले पनि लगातार वर्षा भयो भने रातभर अनिदो बस्नु पर्छ । ‘अहिलेपनि पानी पर्यो भने डर लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘खोलाको छेउमा बसिएका छौ अघिल्लो पटकको बाढीमा लुगाफाटो, खाद्यान्न सबै बगाउँदा धेरै दुःख पाइयो त्यसैले पानी पर्दा रातभर निन्द्रा लाग्दैन ।’ जब पानी पर्न थाल्छ मनमा बिगतका घटनाले सताउछ अझैपनि खोलाको व्यबस्थापन भएको छैन । लामो समय सम्मपनि कुनैपनि सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाएको राइले बताइन । खोलाको छेउमा आफु रहरले होइन बाध्यताले बसेको बताउछिन हिउद भरी रातिको समयमा पालो गरेर सुत्नु पर्दा निकै गाह्रो भएको छ सरोकार वालाले कि खोला व्यबस्थित गरीदिनु पर्यो कि सुरक्षित स्थानमा गाउँ सारीदिनु पर्ने उनि बताउछिन्।
अर्का गैरी गाउँ निवासी संतोष साखि भन्छन् २०७४ को बाढिले घरमा भको सबै सामान र घर बगाएको थियो । जब पानि पर्न थाल्छ मनमा डर हुन्छ रातिमा सुत्न सकिदैन । बाढि भन्दापनि खोलाको कटानिको जोखिम बढि रहन्छ जब असार लाग्छ त्यतिखेर घर छोडेर अन्य ठाउँमा कोठा लिएर बस्ने गरेको बताउछन् । माथिल्लो क्षेत्रमा बाध बार्न सुरु गरेपनि बस्तिलाइ सुरक्षित हुनेगरी बाध नबाधेको साखि बताउछन् ।
सम्पुर्ण गैरी गाउँ बासि असार महिना लागेपछि उनिहरु गाउँ छोडेर हिड्न बाध्य छन् । बाढि गएको यत्रो बर्ष बित्तापनि सम्बन्धित निकायले बाढि रोक थामका लागि केहि नगरेको गैरी गाउँ बासिको गुनासो छ । दिनको समयमात जेनतेन बसिन्छ तर राति भएपछि खोलाको निगरानिमा रातभर अनिदो बस्नुपर्ने हुन्छ । २०७४ सालमा आएको बाढिले पुर्वाञ्चलमा सबै भन्दा बढी सुनसरीको इटहरीमा मानविय क्षति पुर्याएको थियो । खोला किनाराको वस्तीलाई अनेत्र स्थान्तरण नगरे पुन बाढिले क्षति पुर्याउने तर्फ मध्यनजर गर्दै सरोकारवाला निकायहरुले आफुहरुलाई अनेत्र बसोवासको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बुढि खोला किनाराका बाढि पिडितहरुको माग गर्दै आएका छन यस्ता बिषयमा सरोकार वाला निकायले बेलैमा ध्यान दिन जरुरी छ ।